पाल्पा ३१ असार ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन नजिकिएसँगै पाल्पा जिल्लामा चुनावी चहलपहल बढेको छ । जिल्ला सभापतिका पदका लागि आकाङ्क्क्षीहरु कसैले खुलेर त कसैले अरुलाई देखाएर आफ्नो नाम चर्चामा ल्याउन थालेका छन् । धेरै आकाङ्क्क्षीले आफ्नो नाम सार्वजानिक नगरेपनि भित्रभित्रै कसरत भने सुरुवात गरिरहेका देखिन्छन् । कसरी समूहमा पर्ने, केन्द्रीय नेताको राय र सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्ने भन्दै कसरत सुरु हुन थालेको छ ।
चुनावी सरगर्मी बढेसँगै जिल्लाका नेताहरुले विभिन्न पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दावी गर्न लागि परेका छन् । नेपाली कांग्रेस पाल्पाका जिल्ला उपसभापति देवराज ढकाल र विद्यार्थी नेता हिमालदत्त श्रेष्ठले आसन्न जिल्ला अधिवेशनमा सभापति पदमा आफ्नो उम्मेदवारी अनौपचारिक घोषणा गरेका छन् ।
यमलाल तिमिल्सिना, कृष्ण प्रसाद बस्याल, हिमालदत्त श्रेष्ठ र देवराज ढकालको नाम बढी चर्चामा छ । यद्यपी माधव नेपाल, विधान श्रेष्ठ र ज्ञान बहादुर गाहा पनि जिल्ला सभापतिमा आकंक्षी देखिएका छन् । जिल्ला सभापतिका लागि चर्चामा रहेको नामको अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो भने लागेको देखिँदैन । महाधिवेशन नजितीकन सभापति बन्न नपाईने अवस्था भएका कारण नाम घोषणा गर्न आकंक्षीहरु भने अन्यौलमै देखिन्छन् । किनकी अघिल्लो महाधिवेशनमा नाम घोषणा गरेकाहरु वडा तहबाटै फालिएका थिए जो निर्वाचनमा सामेल हुने गरि अगाडी बढ्न सकेका थिएनन् ।
पाल्पा जिल्लामा सभापति, उपसभापति एकएक जना, सचिव र सहसचिव २÷२ जनाका लागि जिल्लामा निर्वाचन हुँदैछ । सचिव पदमा हुने निर्वाचनका लागि क्षेत्र नं. १ र क्षेत्र नं. २ बाट एकएक जना हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । कोषाध्यक्ष पद भने मनोनित हुनेछ ।
जिल्ला सभापति पदमा सहमती चयन हुँदा यमलाल तिमिल्सिना र कृष्ण बस्याल मध्ये एकको सम्भावना बलियो देखिएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । तर को कुन पक्षबाट उम्मेदवारी दिन्छ भन्ने कुरामा आगामी नेतृत्व चयन हुने देखिन्छ । जिल्ला सभापति पदमा आकंक्षी देखिनुपर्ने रामपुर नगरपालिका प्रमुख समेत रहेका रमण थापा अहिलेसम्म खुलेका छैनन् न त उनको कसैलाइ सपोर्ट र विरोध नै देखिन्छ ।
पाल्पाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधी क्षेत्र नं. नं. १ र २ बाट २४/२४ जना, २ क्षेत्रीय सभापति पदेन र अपाङ्ग क्षेत्रको प्रतिनिधीत्व हुने गरि एक जना छनौट हुनेछन् ।
पाल्पामा ९ हजार १ सय ५८ क्रियाशील सदस्य रहेका छन् । पार्टीका जिल्ला सभापति वीर बहादुर राना दुई कार्यकाल सभापति बनिसकेको हुँदा विधानत अब जिल्ला सभापतिमा निरन्तर दावी गर्न नमिल्ने बताईएको छ । जिल्ला सभापति राना भन्नुहुन्छ, ‘पक्कै पनि मैले दुई कार्यकाल पाल्पाको पार्टी सभापति चलाए, बिधानत अव अर्को नेतृत्व आउनुपर्छ । साथीहरु आंकक्षि हुनुहुन्छ, मैले नामै किटान गरेर त भन्दिन तर केही साथीहरुको आकंक्षा छ । नेपाली काँग्रेसको पार्टी सभापति हुनका लागि वडा देखी क्षेत्रिय महाधिवेश प्रतिनिधि हुदै छनौट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप नै साथीहरु आउनुहुन्छ । राजनीतिबाट प्राप्त भूमिकामा रहेका व्यक्तिले पध्दति अनुसारको प्रवृत्ति देखाउन नसक्दा पध्दति माथि नै बितिष्णा जागेको हो, त्यसैले संगठन केन्द्रित नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
कांग्रेस केन्द्रीय समितिले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार पाल्पामा पार्टीको जिल्ला अधिवेशन आगामी साउन २६ गते हुनुपर्नेछ । आगामी साउन १२ गते तोकिएको महाधिवेशनमा १० स्थानीय तहमा गाउँपालिका वडाका क्रियाशील सदस्यले सहभागिता जनाउन पाउने छन् । साउन १२ गते वडा अधिवेशन, १६ गते गाउँपालिका तथा नगरपालिका अधिवेशन, २० गते प्रदेश, २३ गते क्षेत्रीय अधिवेशन, २६ गते जिल्ला अधिवेशन हुनुपर्नेछ । – सेरोफेरो न्यूजको सहयोगमा
पाल्पामा ५ बजेसम्म पसलहरु, जोर बिजोरमा यातायात
बगनासकालीमा कक्षा २ को स्थानीय पाठ्यक्रम तयार